के जुस पिउँदा तौल कम हुन्छ? – MEDIA DARPAN
के जुस पिउँदा तौल कम हुन्छ?
मिडिया दर्पण	 प्रकाशित १३ कार्तिक २०७५, मंगलवार १३:०५
ताजा जुसको सेवन स्वास्थ्यका लागि एकदमै लाभदायक हुन्छ । जुसले पाचन यन्त्रलाई सहज बनाउने मात्र होइन, पोषण पनि दिन्छ । फल, सब्जी आदिको जुस बनाइन्छ । बजारमा उपलब्ध प्याकेटको जुस भने त्यती लाभदायक नहुने बताइन्छ । संभव भएसम्म ताजा फलफूलको जुस सेवन गर्नुपर्छ । यसले स्वास्थ्यमा राम्रो फाइदा त गर्छ, तर यसका लागि केही सावधानी भने अपनाउनुपर्छ ।
यस किसिमको खानपान तालिका अनुसरण गर्नुअघि पोषणविद्सँग भने सल्लाह गर्नैपर्छ । अतः यसरी अन्य खानेकुरा छाडेर जुस मात्र सेवन गरिरहँदा शरीरमा के असर गर्छ त ?
– वाटर वेट कम हुन्छ ।
– मेटाबोलिज्म धिमा हुनसक्छ ।
– उर्जा कम हुनसक्छ ।
– पेटलाई आरम मिल्छ ।
– भोक कम गर्छ ।
तनुश्रीको बलत्कारपछि राखीले कहिलै यौनसम्पर्क नगर्ने
तनाव कम गर्न रुने थेरापी